काठमाडौं – धारा ३७० खारेज गरिएपछि कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजादले सरकारको कटु आलोचना गरिरहेका छन् ।
आजादले सोमवार कश्मीरको वर्तमान परिस्थितिका बारेमा बयान दिए । कश्मीरमा स्थिति चिन्ताजनक रहेको उनको भनाइ छ । युवाहरूलाई घरैबाट जबर्जस्ती उठाएर लगिएको र मानिसहरूमा डर रहेको उनको भनाइ छ ।
एक मिडिया च्यानलसँग कुराकानी गर्दै आजादले भने, ‘कश्मीरमा सबै कुरा शान्तिपूर्ण तवरले गरिँदैछ भन्ने दाबीमा कुनै दम छैन । मानिसहरू डरको छायाँमा बाँचिरहेका छन् । युवाहरूलाई प्रहरी र सुरक्षाबलले जबर्जस्ती लगेका छन् । अहिलेसम्म कतिजनालाई पक्राउ गरिएको भनी सरकारले सत्यतथ्य बताओस् ।’
कश्मीरी नेताहरूलाई नजरबन्द गरिएको विषय पनि आजादले उठाए । उनले भने, ‘परिस्थिति सामान्य हुन्थ्यो भने नेताहरूलाई किन नजरबन्दमा राख्नुपरेको ? मानिसहरूलाई घरबाट निस्कन दिइएको छैन । सबै ठीक भए यस्ता प्रतिबन्ध किन लगाइएको हो ? प्रदेशका नेताहरूलाई तुरुन्तै रिहा गरिनुपर्छ ।’
यसअघि विद्यार्थी नेता शहला राशिदले पनि एकपछि अर्को ट्वीट गर्दै कश्मीरमा भयको वातावरण रहेको लेखेकी थिइन् । तर भारतीय सेनाले शहलाका दाबीहरू आधारहीन रहेको बताएको छ । सेनाले बयान जारी गरेर कश्मीरको हालत ठीक रहेको बताएको छ ।
सोमवारबाट कश्मीरका अनेकौं भागमा स्कूलहरू खोलिएका छन् ।